दलान नेपाल : मधेशमा काग्र्रेस एमालेकै मधेशी नेताहरु आन्द्योलनमा व्यापक सहभागीता जनाउछन - भोगेन्द्र झा
मधेशीहरु सन्तुष्ट छैन भन्नु भयो, के गर्छन त अब मधेशीहरु ?
- हेर्नुस मधेश फेरी एक चोटी आन्द्योलनको वाटोमा अघि वढीसकेके भान भईरहेको छ मलाई । जनकपुर लगायतका अन्य मधेशका क्षेत्रहरुमा जे म देखिरहेको छु त्यसले आन्द्योलनको ग्राउन्ड बनिसकेको देखिन्छ ।
तपाईले मधेश आन्द्योलनको वाटोमा अघि वढीसकेको भन्नु भयो, तर काठमाडौमा एकथरीले वर्तमान मधेशी पार्टीहरु वाट आन्दोलन सम्भवै छैन भन्न छन नि ?
- म पनि नेपालको कथित राष्टिय मिडियाहरुमा यो कुराहरु देखीरहेका छौ । तर उनीहरु के बुझेका छैन कि आन्दोलन नेताका लागी हुदैन । आन्द्योलन त मुद्धाका लागी हुन्छ । र मधेशको मुद्धालाई नयां मस्यौदाले पुरै अस्विकार गरेका छन । मधेश आन्द्योलनको अस्तीत्वलाई समाप्त पार्न काम गरेको छ । त्यसैले याहाका सवै वर्गका युवाहरु आन्द्योलित छन । तपाईलाई जनकपुरकै म उदाहरण दिन्छू, याहा आन्द्योलनका लागी युवाहरुको एउटा समिती बनेको छ, जुन समितीमा मधेशी पार्टीहरु सहित काग्रेस, एमाले, एमाओवादी पार्टीहरुका युवाहरु सक्रिय छन ।
तपाईले मधेशमा सवै पक्ष आन्दोलनको मुडमा छन भन्नु भयो । मधेशमा अब कसरी आन्द्योलन अगाडी वढछ जस्तो तपाईलाई लाग्छ ?
- हेर्नुस, मधेशमा कसरी आन्द्योलन अगाडी वढछ, त्यो कुरा भन्न चाही अहिले नै अली चाडो हुन्छ । तर आन्द्योलन हुन्छ भन्ने कुराको भान सर्वत्र दे्खिन्छ । मलाई त के लाग्छ भन्ने यदी अबको आन्द्योलनलाई कुनै वाहानामा मिनिमाईज गर्ने चेष्टा भयो भन्ने मधेशमा काग्रेस, एमाले र एमाओवादी पार्टीहरुकै मधेशी नेताहरु सहभागीतामा ठुलो विद्रोह पनि हुन सक्छ ।
तपाईले भने अनुसार त अवस्था एकदमै भयानक तिर लम्किीरहेको छ । आखिर किन यत्रो वातावरणको निर्माण भईरहेको छ ?
- हेर्नुस, अहिले जती विरोधका कुराहरु आए पनि मलाई लाग्छ मुख्य कुरा संीघयता नै हो । र अरु वुदामा मेरो बुझाईमा चार दल वार्गैनिंगका लागी पनि केही नचाहिने कुरा राखी दिएका छन । भोलीका दिनमा नागरिकता लगायतका केही प्रावधानमा संधोशन गरेर संीघयतामा ठग्ते चाल पनि चलीरहेको भान छ । त्यसैले मधेशीहरु सबै भन्द्या वढी संघियताकै लागी आक्रोशित छन जस्तो मलाई लाग्छ ।